Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 22:1-51
Onyankopɔn nkwagye nnwuma nti, Dawid yii no ayɛ (1-51)
Anokwafo na Yehowa di wɔn nokware (26)
22 Ɛda a Yehowa gyee Dawid fii n’atamfo nyinaa nsam,+ na ogyee no fii Saul nsam+ no, saa da no na Dawid kaa dwom+ yi mu nsɛm kyerɛɛ Yehowa. 2 Ɔkae sɛ: “Yehowa ne me botan, m’abannennen,+ ne me Gyefo.+ 3 Me Nyankopɔn yɛ me botan.+ Ɔno ne me guankɔbea,Me kyɛm+ ne me nkwagye* abɛn,* me hintabea.*+Me guankɔbea,+ me Gyefo;+ wugye me fi awudisɛm mu. 4 Yehowa fata ayeyi paa, na ɔno na misu frɛ no;Obegye me afi m’atamfo nsam. 5 Owu asorɔkye twaa me ho hyiae;+Ahuhufo a wɔte sɛ nsuyiri hunahunaa me.+ 6 Ɔdamoa* nhama twaa me ho hyiae;+Owu sum afiri wɔ m’anim.+ 7 Misu frɛɛ Yehowa wɔ m’ahohia mu;+Misu frɛɛ me Nyankopɔn daa. Ɔtee me nne wɔ n’asɔrefi hɔ,Na me sufrɛ no duu n’asom.+ 8 Ɛnna asaase hinhimii, na ɛwosowee denneennen;+Ɔsoro fapem wosowee,+Na n’abufuw nti, ɛwosowee biribiri.+ 9 Wusiw fi ne hwene mu puei,Na ogya a ɛhyew ade fi n’anom bae;+Nnyansramma fi ne mu dɛwee. 10 Ɔmaa ɔsoro kuntunii, na osianee.+Ná omununkum kusuu wɔ ne nan ase.+ 11 Ɔtenaa kerubim so tu bae.+ Na wohuu no sɛ ɔte ɔbɔfo ntaban* so.+ 12 Afei ɔde sum kataa no so te sɛ apata,+Ɔde osu a amuna tumm ne omununkum kusuu kataa ne ho. 13 Hann a efi n’anim no, emu na nnyansramma fi dɛwee. 14 Ɛnna Yehowa fi ɔsoro boboom;+Ɔsorosoroni no maa ne nne so.+ 15 Ɔtotow n’agyan,+ na ɛbɔɔ wɔn hwetee;Ɔmaa n’anyinam pae guu wɔn so, na wɔn ani so tan wɔn.+ 16 Ɛpo ase daa adi,+Asaase fapem yii ne ho adi, Yehowa animkaNe ne hwene mu home* nti.+ 17 Ɔteɛɛ ne nsa fii soro;Osoo me mu yii me fii nsu a emu dɔ mu.+ 18 Ogyee me fii me tamfo hoɔdenfo nsam,+Wɔn a wokyi me na wɔn ho yɛ den sen me no. 19 Wɔbɛtoaa me m’amanehunu da,+Nanso Yehowa twitwa gyee me. 20 Ɔde me kɔɔ baabi a bɔne biara renka me;*+Ɔpɛ m’asɛm nti, ogyee me.+ 21 Me trenee nti, Yehowa tua me ka;+Me ho a enni asɛm* nti, ɔma me akatua.+ 22 Mafa Yehowa akwan so,Na minnyaw me Nyankopɔn nkɔyɛɛ bɔne. 23 N’atemmusɛm+ nyinaa wɔ m’anim;N’ahyɛde+ nso, meremman mfi ho. 24 Meremma asɛm mma me ho+ wɔ n’anim,Na mɛtwe me ho afi bɔne ho.+ 25 Me trenee ne me ho a enni asɛm nti,Ma Yehowa mma me akatua.+ 26 Nea ɔyɛ ɔnokwafo no, wo nso wubedi no nokware;+Ɔbarima* a ne ho nni asɛm no, wobɛma wahu sɛ wo ho nni asɛm;+ 27 Nea ɔyɛ kronkron no, wo nso wobɛyɛ kronkron ama no,+Na nea ɔyɛ ɔdaadaafo no, wobɛkyerɛ no sɛ w’ani atew kyɛn no.+ 28 Wutwitwa gye ahobrɛasefo;+Na ahantanfo de, w’ani sa wɔn, na wobrɛ wɔn ase.+ 29 O Yehowa, wo ne me kanea;+Yehowa na ɔma esum dan hann ma me.+ 30 Woboa me ma metow hyɛ akorɔmfo werɛmfo dɔm so;Onyankopɔn tumi nti, mitumi foro ɔfasu.+ 31 Nokware Nyankopɔn no kwan di mu;+Yehowa asɛm nso, wɔasɔn so.+ Ɔyɛ ɔkyɛm ma wɔn a wɔde no ayɛ wɔn guankɔbea nyinaa.+ 32 Hena na ɔyɛ Onyankopɔn ka Yehowa ho?+ Na hena na ɔyɛ ɔbotan ka yɛn Nyankopɔn ho?+ 33 Nokware Nyankopɔn no ne m’abannennen,+Na ɔbɛma me kwan adi mu.+ 34 Ɔma me nan yɛ sɛ ɔwansan de,Na ɔma migyina sorosoro.+ 35 Ɔkyerɛ me nsa akodi;Me basa tumi kuntun kɔbere agyan mu. 36 Wode wo nkwagye kyɛm ma me,Na w’ahobrɛase ma meyɛ kɛse.+ 37 Wotrɛw m’anammɔn kwan mu;Me nan* renwatiriw.+ 38 Metiw m’atamfo akɔsɛe wɔn;Merensan kosi sɛ mɛtɔre wɔn ase. 39 Mɛtɔre wɔn ase abubu wɔn, na wɔrensɔre bio;+Wɔbɛhwe ase me nan ase. 40 Wobɛma me ahoɔden a mede bedi ako;+Wobɛma m’atamfo ahwe ase me nan ase.+ 41 Wobɛma m’atamfo adan wɔn ho aguan;*+Wɔn a wokyi me no, mɛsɛe wɔn.*+ 42 Wosu hwehwɛ mmoa, nanso ogyefo biara nni hɔ;Wosu frɛ Yehowa mpo, nanso ommua wɔn.+ 43 Mɛyam wɔn muhumuhu sɛ fam mfuturu;Metiatia wɔn so awɔw wɔn sɛ abɔnten so atɛkyɛ. 44 Me man a wɔkasa tia me no, wubegye me afi wɔn nsam.+ Wobɛkora me so ma madi amanaman so.+Ɔman a minnim wɔn no, wɔn na wɔbɛsom me.+ 45 Ahɔho bɛbrɛ wɔn ho ase ama me;+Nsɛm a wɔbɛtete no bɛma wɔayɛ aso ama me.* 46 Ahɔho bɛpa abaw;*Wɔde ahopopo befi wɔn hintabea apue. 47 Yehowa te ase! Ayeyi nka me Botan no!+ Me nkwagye botan Nyankopɔn no, ma yɛnkamfo no.+ 48 Nokware Nyankopɔn no na otua m’atamfo so ka ma me;+Ɔka aman gu me nan ase;+ 49 Ogye me fi m’atamfo nsam; Woma me so,+ na wɔn a wɔtow hyɛ me so no annya me;Wugye me fi owudifo nsam.+ 50 O Yehowa, ɛno nti, mɛda wo ase wɔ amanaman mu,+Na mɛto ayeyi nnwom* ama wo din:+ 51 Nkwagye nnwuma akɛse na ɔyɛ* ma ne hene,+Ɔda ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ nea wasra no no,Dawid ne n’aseni* daa.”+
^ Anaa “mframa a efi ne hwene mu.”
^ Nt., “Ɔbarima kantinka.”
^ Nt., “Sɛ aso te a, wɔbɛyɛ osetie ama me.”